यो अवस्था रहेसम्म जति आयोजनाको रसुवालीले सेयर प्राप्ति गरेपनि जीवनस्तर उकासिँदैन । मैलुङखोलाको अवस्थालाई हेर्दा जनताको जीवस्तर अझ ओरालो लाग्ने देखिन्छ । के यसका लागि समाधान छैन ? के आवेदन दिँदा उल्लेख गरेको बैंक खातामा सिधै सिद्धार्थ बैंकले फिर्ता रकमको चेक डिपोजिट गरिदिन सक्दैन ? नत्र किन खाता नम्बर उल्लेख गर्नुप¥यो त आवेदन दिँदा ? यति गरेमात्र पनि केही सास्ती कम हुन्थ्यो कि ?
रसुवा जिल्ला पछिल्लो चरण जलविद्युत गृहको सेयर प्राप्तिको हिशावले चर्चामा छ । चिलिमे जलविद्युत केन्द्रले रसुवाली जनतालाई स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको सेयर वितरण गरेर देशभरि नै बन्ने जलविद्युत केन्द्रको स्थानीयलाई प्रभावित सेयर दिने नजीर बसेको छ । मुख्य गरी चिलिमेको सेयर प्रति स्थानीय जनताको आकर्षण बढेको छ ।
चिलिमेलगायतको जलविद्युत केन्द्रको सेयर प्राप्ति पछि रसुवाली जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै बढ्ने पनि चर्चा परिचर्चा छ । तर चिलिमेको सेयर प्राप्तिको चरण पनि संघर्ष नै थियो र सेयर आवेदन दिइसकेपछिको अवस्था त्यति सहज भएन । कतिपय जनताले अझैसम्म पनि सेयर प्रमाणपत्र हात पार्न सकेका छैनन्, त्यसका विभिन्न कारणहरु छन्, ऋणमा आवेदन दिइएको सेयरको ऋण तिर्न, बोनस प्राप्त गर्न काठमाण्डौंसम्म जानुपर्ने अवस्था एकातिर छ ।
पछिल्लो चरणमा दोस्रो पटक मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर आवेदनको अवसर प्राप्त गरे रसुवालीले । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा भन्दा मैलुङखोलाको सेयरमा आवेदन दिनेको संख्या उलेख्य रहेको थियो । न्यूनतम १० कित्तासम्म रसुवाली जनतालाई सेयर दिईने तर ५० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने अवस्थाका कारण पनि धेरै रसुवाली पैसाको जोहो गर्न नसकेका कारण आवेदन दिन छुटे । सेयर आवेदन संकलन गर्न जिम्मेवारी पाएका बैंकमा खाता खोल्न नसकेका कारण पनि धेरै छुटे । गैरजिम्मेवार बैंकका कारण इच्छुक स्थानीय बासिन्दाहरु दिनभरको बाटो हिँडेर, दुई तीन दिन लाईन बसेर पनि आवेदन नै नदिएर घर फर्के । आवेदन दिँदा पनि स्थानीयले निकै सास्ती व्यहोरे ।
मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनाले गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट ग¥यो । ऋण काढ्दै दुई चार दिन लाईन बसेर भरेको सेयरमा खेलबाड गरेर सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र दिएपछि रसुवाली जनताले तत्कालै चर्को विरोध गरे । त्यो विरोधपछि गोलाप्रथाबाट छुटेका सबैलाई १० कित्ताका दरले वितरण ग¥यो । त्योसम्मको अवस्थालाई रसुवाली जनताले सहर्ष स्वागत गरे ।
तर अहिले दशैंको मुखमा सेयर प्राप्त गरेर फिर्ता भएको रकम हात पार्न निकै मुस्किल परेको छ । सिद्धार्थ बैैकबाट जारी भएको फिर्ता रकमको चेक प्राप्त गर्न पनि लाईनमा नै बस्नुपर्ने । अझ भन्नै पर्दा बैंकमा गएको दिनमा पाइदैन, बाहिर ढोकामा आवेदन नं यतिदेखि यतिसम्म यो दिन भनेर टाँसिएको हुन्छ । आफ्नो आवेदन नम्बर त्यो दिनलाई परेन भने यार्साको बच्चाबाट दिनभरको बाटो हिँडेर गएको भए पनि बैंकले दिँदैन, त्यसको लागि पनि कुर्ने वा फर्कने, त्यो समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर चेक प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो खाता भएको बैंकमा पनि दिनभर लाईन बसेर जम्मा गर्नु पर्ने, त्यहाँ पनि सास्ती नै छ ।
सबैभन्दा नमजाको विषय के भने बैंकमा चेक डिपोजिट गरिसकेपछि पनि २० सौं दिनसम्म बैंकले चेक क्लियरिङ गर्दैन । अर्को साता गयो अझै खातामा पैसा जम्मा हुँदैन । किन जम्मा भएन भनी प्रश्न गर्दा बैंकको उत्तर आउँछ भ्याइँदैन । बैंकको यो जवाफ पछि आजित भएर रित्तै घर फर्कनु पर्ने अवस्था छ ।
सेयर प्राप्तिका लागि आवेदन दिन बैंकको पेरिफेरिका वा सोही दिन फर्केर घर पुग्न नसक्नेका हकमा सरदरमा आवेदन दिनका लागि ३ दिन लागेको छ, फिर्ता रकमको चेक लिन १ दिन, चेक डिपोजिट गर्न १ दिन, पैसा फिर्ता पाउन कम्तीमा पनि ३ पटक जानुपर्ने अवस्था छ । अब हिशाब गरौं १० कित्ता सेयर प्राप्त गर्न कति खर्च भयो त ?